လိမ္မော်ရောင်သည် Black3၏ Alysia Reiner ရာသီ ၃ နှင့်ထို့ထက်ပိုသည်။ - Netflix မူရင်း
လိမ္မော်ရောင်သင်္ဘောသဖန်း, ရာသီ 3, နှင့်လိင်တံ Pinatas ကစားအပေါ်နယူးက Black ရဲ့ Alysia Reiner ဖြစ်ပါတယ်
ပြင်ပဘဏ်၏ရာသီ ၂ ဖြစ်တော့မည်
Titus သည် Kimmy Schmidt / OITNB Mashup တွင် Litchfield နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် လိမ္မော်ရောင်သည်လူမည်းသစ်ဖြစ်သည်။ သင်မသိနိုင်သောအချက် ၁၀ ချက် Netflix မူရင်း က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
ပုံထဲမှာပြထားတဲ့ Alysia Reiner နဲ့အတူအဖြေများ Netflix မူရင်းစီးရီး လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည်
လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် မင်းသမီး Alysia Reiner သည်အချိန်ကုန်ဆုံးပြီး ၃ ရက်အကြာ Netflix Life နှင့်စကားပြောရန်သူမအလုပ်များချိန်မှထွက်ခဲ့သည် လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် , ဇွန်လ 12 ရက်နေ့တွင် Netflix ကတာမျိုး။
In OITNB Reiner သည် Litchfield Penitentiary ရှိ Warden ၏အမှုဆောင်လက်ထောက် Litch ပတ်လည်တွင် Fig မှသွားသော Natalie Figueroa ဖြစ်သည်။ သင်္ဘောသဖန်းသည် Litchfield တွင်အကောင်းဆုံးသောသူမဟုတ်ပါ (ဤနေရာတွင်အဘယ်သူမျှမလုယူသောသူ!), သူမကျွန်တော်ပုံမှန်တီဗီလူကြမ်းကိုခေါ်ချင်ပါတယ်အဘယျသို့ကနေပါပဲ။ သူမသည်သေချာဘို့အချို့အနုတ်လက္ခဏာအရည်အသွေးတွေရှိပါဘူး, ဒါပေမယ့်အများကြီးတွေလိုပဲပုံမှရှုပ်ထွေးရှိပါတယ် OITNB ဇာတ်ကောင်တွေအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
ကျနော်တို့သင်္ဘောသဖန်းပင်အကြောင်းကို Reiner မေးတယ်, လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် တစ်ခုလုံးအဖြစ်, ငါတို့ရာသီ3အဘို့အဘယ်သို့မျှော်လင့်နိုင်သလဲဤတွင်သူမပြောခဲ့ရာ:
Netflix Life: အစမှစ, သင်ဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာလဲ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ?
Alysia Reiner: လေယာဉ်မှူးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်။ ငါအဲ့တာကိုကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါဟာတောက်ပနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါအဲလက်စ်အဘို့ကိုဖတ်, ငါမရကြဘူး။ ကျွန်မရဲ့နှလုံးကျိုးပဲ့တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်မကို Fig ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာလိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်၊ သူမလေယာဉ်မှူးမှာမရှိတဲ့အတွက်ငါအဲဒီအကြောင်းဘာမှမသိဘူး။ ငါ Jenji (Kohan) နှင့်ပြပွဲနှင့်အတူစွဲလမ်းခဲ့ကြသောကြောင့်, ဒါပေမယ့်ငါ '' ဟုတ်ကဲ့ '' ဟုပြောသည်။
အားလုံးလက္ခဏာများအားဖြင့်, သငျသညျလူတစ် ဦး ပေးခြင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့, အေးမြ, ကြောက်မက်ဘွယ်ပါပဲ။ သင်္ဘောသဖန်းသီးစရိုက်လက္ခဏာပြရန်ခက်ခဲသလော။
မဟုတ်ခဲ့ မင်းသိတယ်၊ ငါအမြဲပြောတာကလူတွေကသူမကိုသိပ်ကောင်းတဲ့အရာတွေလို့မခေါ်ကြတဲ့အခါငါအမြဲတမ်းပြောနေတယ်၊ ​​မင်းကဆာလောင်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုယ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ သင်အရမ်းပင်ပန်းနေပြီးသင်အရမ်းစိတ်ပျက်မိတယ်၊ ဘာမှမသွားဘူး၊ ပြီးတော့မာကျူရီဟာ retrograde ဖြစ်ပြီးသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကလူတွေကဒီလောက်မိုက်မဲတယ်။ ထို့နောက်ပုံကစားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ဘယ်အချိန်မှာ Fig ကသူမမှားယွင်းတဲ့အမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်ထင်သလဲ
Ohhhh, ငါသူမကအမှားလုပ် Fig ကိုအစဉ်အဆက်ဝန်ခံလိမ့်မည်ဟုငါမသိရ။ သူမသည်သူမအမှားများစွာပြုလုပ်သည်ဟုမထင်မှတ်သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
သူသည်လုံး ၀ ရှုပ်ထွေးနေကြောင်းဝန်ခံလိမ့်မည်လောသို့မဟုတ်အရာများကိုကျော်လွှားရန်အတားအဆီးများအဖြစ်ရှုမြင်ပါသလား။
ငါသူမအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖွင့်လို့ထင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ငါကတော်တော်နုအရည်အသွေးကိုကြောင့် '' မိန်းကလေး '' ဟုပြောသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်သူမသူ့ကိုယ်သူများအတွက်တာဝန်ယူတဲ့သူမိန်းကလေးတစ် ဦး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့အရာရာမှားသွားရင်ကမ္ဘာကြီးကိုသူအပြစ်တင်လိုက်တာပဲ။ နှင့်အညီ, သူမနှင့်ငါအကြားနောက်ထပ်အရေးပါခြားနားချက်
ငါကအရာရာတိုင်းအတွက်တာ ၀ န်အများကြီးယူတယ်၊ ငါလည်း 'ဒီကနေငါဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရမလဲ' ကဲ့သို့သောမိန်းကလေးအမျိုးအစားလည်းငါလည်းဒီကနေငါဘယ်လိုကြီးထွားနိုင်မလဲ? 'ပြီးတော့သူမ' The Worldf** ks, ' သင်သိလား?
ပထမ ၂ ရာသီကာလအတွင်းတွင်မတူညီသောဇာတ်ကောင်အမြောက်အမြား၏ဘ ၀ များကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်္ဘောသဖန်းပင်အတွက်အမြဲတမ်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့သလား၊ သငျသညျကနှစ်ခုသာလိုင်းများခဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်
မှန်ကန်သော သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုနောက်ဇာတ်ညွှန်းမတိုင်မီအစီအစဉ်ကိုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ကြဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကဘာလဲဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး။
ရာသီ3တွင်သင်္ဘောသဖန်းသီးမှအဘယ်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သနည်း သူမပြန်လာနိုင်အောင်ငါတို့မျှော်လင့်နိုင်မလား? သဲလွန်စတွေပေးလို့ရမလား?
ငါ Fig တစ်တိုက်လေယာဉ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ဒါကငါပြောလိမ့်မယ်ကြီးမားတဲ့အရာပါပဲ, သူသည်သူမ၏သူမ၏ချအများကြီးခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။
အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါသင်ဘာထင်သလဲ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် 's အမွေဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
အစဉ်အလာအားဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုဖျော်ဖြေရေးတွင်မတူကွဲပြားမှုများပိုမိုများပြားလာစေရန်၊ ဖျော်ဖြေရေးတွင်အမျိုးသမီးများပိုမိုများပြားလာစေရန်နှင့်အကျဉ်းထောင်လူ ဦး ရေအပေါ်ပိုမိုသနားကြင်နာမှုနှင့်ထောင်တွင်းရှိလူ ဦး ရေကိုပြောင်းလဲစေသည့်ပြပွဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ပြီးတော့၊ အဲဒါကငါတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ထောင်စနစ်ကိုပိုကောင်းအောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ဒါကငါ့အိပ်မက်ပါပဲ
ခုနစျပါးသေစေနိုင်သောအပြစ်များရာသီ4လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ netflix
ပါဝင်ပတ်သက်ခံရခြင်း၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကဘာလဲ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ?
Hulu ချီတက်ပွဲ 2018 ရက်နေ့တွင်အသစ်ကဘာလဲ
အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း ... ငါမသိရပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတူဘဲငါကစားဖူးသမျှနှင့်မတူသည့်ဤကြွယ်ဝသော၊ ရှုပ်ထွေးပြီးအံ့သြလောက်ဖွယ်ကောင်းသောစစ်မှန်သောဇာတ်ကောင်ကိုကစားရန်ရယူခြင်း။ ထိုအဘို့အချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ၎င်းသည်ချစ်မြတ်နိုးရသောအရာတစ်ခုခုပေါ်တွင်ရှိနေခြင်းသည်သရုပ်ဆောင်ကဲ့သို့၎င်းလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့အကြိမ်များစွာမင်းဟာတစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ နှင့်အညီ, သငျသညျကိုမြင်ရအံ့သောငှါအံ့သြဖွယ်အရာတစ်ခုခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရုံထိုကဲ့သို့သောလက်ဆောင်တစ်ခု, လား
ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ လူသတ်မှုကိုမည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်နည်း ?
ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်သရုပ်ဆောင်ထားသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရေးအသားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒီတော့ဒါတွေဟာငါတို့ရဲ့အံ့ similar ဖွယ်တူညီချက်တွေပါဘဲ။
အဘယ်အရာကိုအကြောင်းကိုသင်အများဆုံးအံ့အားသင့်ရဲ့ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် အခုထိတွေ့ကြုံမှုလား
ဒါကြောင့်သင်ပြပွဲကိုကြည့်သလဲ သင်လုပ်လျှင်၎င်းကိုသင်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သလား၊ သို့မဟုတ်ပရိသတ်များကဲ့သို့အရက်မူးနေသည့်နာရီကိုသင်အသုံးပြုသလော။
ကောင်းပြီ, ငါသေချာပေါက်မကြည့်နိုင်ပါ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ကြိုက်နှစ်သက်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါကလူတိုင်းရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်။
နှင့်အညီ, ငါ့စောင့်ကြည့်ဖို့ရည်ညွှန်းအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ရုံပြပွဲပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ငါအငမ်းမရကြိုက်တယ်တချို့ပြပွဲများနှင့်ငါတဖြည်းဖြည်းဖြုန်းဖို့ကြိုက်တယ်အခြားပြပွဲ။
ထုတ်လုပ်သူ၊ စာရေးဆရာ၊ မင်းသမီးအနေဖြင့် Netflix မော်ဒယ်လ်ကိုရိုးရာအစဉ်အလာနှင့်တစ်ပါတ်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်သို့ခံစားရမည်နည်း။
ငါ Netflix ကလူရွေးချယ်မှုပေးသောချစ်ကြတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းသည်ရေခဲမုန့်တစ်ဂါလံကို ၀ ယ်ယူသကဲ့သို့၎င်းသည်ယခင်ကရေခဲမုန့်တစ်ခွက်သာ ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်နေရာနှင့်တူသည်။
ယခုသင်သည်ရေခဲမုန့်ဂါလံကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ လူအချို့ကတစ်လလုံးသူတို့၏အိမ်တွင်ရေခဲမုန့်ဂါလံရှိနိုင်သည်။ အချို့လူများသည်တစ်ညတာတွင်ရေခဲမုန့်တစ်မျိုးလုံးကိုစားသုံးနိုင်သည်။
အခုကရုရှားလိုမဟုတ်ဘူး။ သင်၏ဖျော်ဖြေမှုကိုသင်နှစ်သက်လိုသည့်အရာကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်။ သင့်အတွက်မရွေးချယ်ပါဘူး
ကျွန်ုပ်တွင်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုရှိနေသည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာတွေဆီပို့ပေးလိုက်တဲ့ penis pinata ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာမင်းကိုပြောပြနိုင်မလား။
အလိုတော်ဥယျာဉ်၏ရာသီ7နှင့်အပန်းဖြေ Netflix အပေါ်ဖြစ်သည့်အခါ
Nope ။ ဒါကငါ့လျှို့ဝှက်ချက်ပါ။
ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @alysiareiner gရာလိင်တံpiñataများအတွက်!
- လိမ္မော်ရောင်စာရေးဆရာများအခန်း (@OrangeWriters) မေလ ၆ ရက်၊
မင်းကဘာတွေမြင်နေလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပါ။ ) https://t.co/kRH4gTTJZI
- alysia reiner (@alysiareiner) မေလ ၇ ရက်၊
အလုပ်မှာခက်ခဲရော့ခ်။ ဟုတ်ကဲ့ @aregnery @MistyRoseyPosey @lomorelli ဓာတ်ပုံ Cred: @JimDangerGray pic.twitter.com/3ZKWdwJ2LI - လိမ္မော်ရောင်စာရေးဆရာများအခန်း (@OrangeWriters) မေလ ၆ ရက်၊
Alysia Reiner ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သငျသညျ Twitter ပေါ်တွင်သူမ၏နောက်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ် ( @alysiareiner ) အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ရယ်မောစရာတွေ၊ လှုံ့ဆော်မှုတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်မင်းသူမရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ် alysiareiner.com သူမလာမယ့်တက်မယ့်အဘယ်အရာကိုမြင်!
ဒိုင်းလွှားကိုရာသီ၏အေးဂျင့်4Hulu